Vietnam ny firenena farany mandrara ny sidina Sina
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Vietnam ny firenena farany mandrara ny sidina Sina
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Febroary 1, 2020
Ny manampahefana Vietnam dia nanambara ny fandrarana ny sidina mankany sy avy any Sina noho ny loza ateraky ny fiparitahan'ny Coronavirus Covid-2019 vaovao. Manomboka amin'ny 9:00 ny 1 febroary, ny fahazoan-dàlana rehetra amin'ny sidina manelanelana an'i Shina sy i Vietnam nofoanana. Talohan'izay, ny faritany Vietnam Quang Nin dia efa nanidy ny sisin-tanin'i Shina mba hisorohana ny fidiran'ny olona voan'ny coronavirus.
Any amin'ny seranam-piaramanidin'ny firenena maro izao, dia jerena manokana ireo tonga avy any Shina. Nojeren'ny dokotera tamim-pitandremana izy ireo amin'ny fisian'ny aretina coronavirus. Ohatra, any Russia, ny sidina rehetra avy any sy mankany Shina dia nafindra tany amin'ny terminal F mitokana ao amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo ao Moskoa.